Imbali ka-Aquarius - Emanzini
Ulwazi ngeMbali ka-Aquarius kunye neNtsomi x
Uphawu lwe Aquarius ayingqamani nekroza leGemini. Kwi-zodiac, ifumaneka phakathi kweCapricorn kunye neePisces, ithatha ishumi elinanye le-30 degrees yesangqa se-zodiacal. I-Aquarius luphawu olusisigxina oluza emva kokuba ubusika buqale eCapricorn. Imele indawo ezinzileyo, enekhephu kunye nebandayo yasebusika, ngaphambi kokuba kubekho naluphi na uphawu lwentwasahlobo.
Igama lale nkwenkwezi sisiLatini somphathi wamanzi okanye ophethe ikomityi kwaye yenye yezona zindala zamakroza aziwayo ecaleni kwezodiac. Yakhankanywa nguPtolemy ngenkulungwane yesi-2 AD, kodwa ngaphambi koko yayigqalwa njengoMkhulu kwiikhathalogu zeenkwenkwezi zaseBhabhiloni. KumaBhabhiloni amandulo lalimele uthixo uEa ngokwakhe, umlawuli weyona kota isemazantsi yendlela yeLanga (ithuba leentsuku ezingama-45 kumacala omabini eentsomi zasebusika). I-Ea yayimelwe ibambe i-vase ephuphumayo kwaye idibene nezikhukhula ezitshabalalisayo. KwiYiputa yaMandulo, uAquarius wayenxulunyaniswa nomkhukula wonyaka woMnayile yaye iindonga zomlambo kwakusithiwa zaziphuphuma xa uAquarius wafaka ingqayi yakhe emlanjeni ekuqaleni kwentwasahlobo. AmaGrike ayecinga ngekroza njengevazi elula, egalela amanzi.
Iqela leenkwenkwezi ze-Aquarius alinazo iinkwenkwezi eziqaqambileyo, kwaye ifumaneka kummandla odla ngokubizwa ngokuba lulwandle, ngenxa yenani elikhulu lamakroza anamagama anxibelelene namanzi, anjengeCetus (umnenga), iiPisces (intlanzi) noEridanus. (umlambo).
Nangona kukho unxibelelwano noDeucalion, owakha inqanawa nomfazi wakhe ukuze basinde kwisikhukula esasiza kufika, ibali elidla ngokulandela ikroza leAquarius liyintsomi kaGanymede.
UGanymede wayeyeyona nkwenkwe intle ngelo xesha, eyathinjwa ngoothixo ngenxa yobuhle bayo yaza yasiwa kwiNtaba yeOlympus apho wathatha indawo kaHebe njengoZeyus’ umngcamli. Kukho inguqulelo yentsomi apho uHebe waphelelwa ngumsebenzi xa wakhubeka yaza ilokhwe yakhe yaqhawuka, iveza amabele akhe. Noko ke, wathatyathelw’ indawo yindoda eselula, entle, ekucingelwa ukuba isithandwa sikaZeyus. UHebe wayeyintombi kaHera kwaye uthixokazi ophakamileyo waba nomsindo ngenxa yolu tshintsho. Ngenxa yokulwa rhoqo, uZeus owayephoxekile wasuka nje wafaka uGanymede ezinkwenkwezini.
Ngenye inguqulelo yale ntsomi, uGanymede wathatyathwa nguAkwila (elinye lamakroza aselumelwaneni), ukhozi lukaZeyus. Ngomnye, uZeus waguquka waba lukhozi ngokwakhe waza wamxhwila. Ukuze ahlawule ngokuthabatha unyana wakhe, uZeyus wanika uyise, ukumkani waseTroy ihashe lobuthixo nomdiliya wegolide. UGanymede wayengumntu wokuqala owafayo ukuba angafi. Kubalulekile ukuqonda ukuba i-duality inikezelwa ngomqondiso we-Aquarius, njengoko ibonisa amanzi ngaphezu kobomi obuxhasayo. Oku kuthetha ukuba uGanymede wayengumntu wokuqala ofayo owayeqonda into evela phezulu kwaye wanika olu lwazi kubantu abaqhelekileyo.
Unxibelelwano phakathi kwentsomi ye-Aquarius kunye nomqondiso we-zodiac we-Aquarius
U-Aquarius umele, ngandlela-thile, inceba yoothixo. Kwangokunjalo uGanymede waqatshelwa zizithixo ngenxa yobuhle bakhe, lo mntu wayenokuba mhle okanye akhetheke ngayo nayiphi na enye indlela, ngokwaneleyo ukuba axhaswe yindalo okanye abongamileyo bakhe. Eli libali lobuThixo bomntu, ukukwazi ukubona izinto ukusuka phezulu, ukufikelela esibhakabhakeni ngayo nayiphi na indlela enokwenzeka, kwaye wabelane ngomyalezo ongcwele kunye nabantu nje abafayo. Ngendlela esebenzayo, lo mqondiso uya kusixelela ngomntu oya kufumana lula umsebenzi omhle kakhulu kwaye asebenze kwizakhiwo eziphakamileyo zoluntu.
Ubuhle bomntu akunyanzelekanga ukuba bube bomzimba, kodwa bunokubonwa nangetalente ethile okanye isakhono esikhethekileyo. Singabona umntu oselula, onesidingo sokwahlukana notata onempembelelo kwaye aziqalele umsebenzi wakhe. Kwi-Aquarius sikwabona izinto ezinokubakho kwi-bisexual kunye ne-homosexual preferences, kunye neenzuzo ezinokubakho umntu anokuba nazo ngenxa yazo.
Icala elibi lale ntsomi likuGanymede ethatha indawo kaHebe, kwaye oku kunokubonakala njengomntu omhle othatha isikhundla esifanelekileyo somnye umntu, emsebenzini, okanye nasentsatsheni. Kwimeko enzima kakhulu, ukuthunjwa kweGanymede kubonisa indlela umntu aya kuthathwa ngayo esibhakabhakeni kwaye angakhomba kwiingozi zokuhamba nge-plain, okanye i-paragliding, i-parachute jumping, njl.
Aquarius Gemini Virgo I-Capricorn Pisces